Olwemfucuza kalwehli kahle kuMasipala uMsunduzi – Msunduzi News
Imibiko kanjalo nombono wokuthi iNhlokodlobha kayihlanzekile iyabakhathaza abaphathi nezisebenzi zoMkhandlu uMsunduzi. Lokhu kulandela uchungechunge lwemibiko ngesimo esingesihle ngaphakathi nangaphandle kwedolobha. Lokhu kuchaza ukuthi imfucuza ilahlwa ezindaweni ezingafanele nokugcina sekudale ukungcola ezingxenyeni ezithile zedolobha.
Lesi simo senze uMkhandlu wadingida izindlela okungaqedwa ngazo noma kugwenywe lokhu. Ikhuluma naleli phephanda iMeya uNjilo ithe abantu baseMsunduzi bakhala kufanele wabe esegcizelela ekutheni kuzo zonke izixazululo kulolu daba asikho esedlula ukungenelela komphakathi.
“Yebo omunye umsebenzi kaMasipala, njengokulawula komthetho, wukuqinisekisa ukuqoqwa kwemfucuza. Ukuphila ngaphansi kwendawo ehlanzekile yinto eyilungelo elikumthethosisekelo. Kungalesi sizathu njengoMsunduzi sizoqhubeka nemizamo yokuhlanza indawo yethu hhayi kuphela edolobheni kepha nasemalokishini nasezindaweni ezingaphansi kwaMakhosi,” kusho iMeya.
Iqhubeke yathi: “NjengoMasipala singawathenga amaloli, siqashe abantu bokuqapha isimo kepha abantu abangenza imizamo yethu ibe nomphumela obonakalayo wumphakathi. Yiwo ongaqinisekisa ukuthi lezi zinyemfu ezigcolisa idolobha lethu ziyanqandwa,” kuphetha iMeya obekubonakala ukuthi lolu daba luyayinenga.
Ekuhambeleni ezinye zalezi zindawo okukhalwa ngazo nasekuzweni ilaka labantu okuqgamile ikakhulukazi maphakathi nedolobha wukuthi eminye imindeni ehlala maphakathi nedolobha inqwabelene nokwenza inani lezikhwama zikacwazi ohlinzekelwa nguMasipala zehluleke ukwenelisa izidingo zaleyo mfucuza okusuke kulindeleke ukuthi ifakwe kuzo.
UMasipala kuze kube manje usesebenzise izigidi zamarandi egcwalisa indawo engumfothongwana emgwaqeni uNew England lapho umphakathi kulahlwa uzilahlela khona ngokungemthetho yonke inhlobo yemfucuza. Kumanje uMkhandlu unezisebenzi ezingama-337 eziqashwe nguMnyango ngokugcwele phezu kwezindleko ezinokugwemeka zemfucuza engenasidingo.
Ephawula ngalokho okuyimizamo kaMasipala uMnu uCryil Naidoo oyiMeneja ebambile uthe uMnyango usanda kuqasha abantu ukuba, phakathi kokunye baqaphe ukulahlwa kwemfucuza ngokungemthetho.
Ubuye waveza ukuthi uMasipala usuqale ukwethula uhlelo lokuthi lapho kuchithwa khona ngokungemthetho kusungulwe isivande esizokondla imindeni.
UMasipala uvele unezivande eziyisikhombisa ezikulezi zindawo: ePelham, eGrange, ePrestburry, eSouth Road, eSobantu, e-Eastwood naseHilton.
UMasipala usanda kuthenga amaloli ayisishoyagalombili anezigqishelanisi zemfucuza abiza izi-R18 672 000, isigugula esibiza izi-R3 500 000; iTLB yesamaba esiyizi-R877 409 kanye namaloli amathathu aqethukayo alayisha amathani amane lilinye ngezindlela eyizi-R2 875 019,50.
Ekuqaleni uMasipala bekufanele uziqashe lezi zithuthi eziyisidingo esinqala ngemali elinganiselwa ezi-R1 182 000 ngenyanga okugcina kudle izi-R14 184 000 ngonyaka.
Previous post: Inqabakutholwa yomsungulibhizinisi waseMsunduzi
Next post: AmaNadi nesiqalo esisha